Ukhohlakele uRobert Mugabe - Ungqongqoshe | isiZulu
Ukhohlakele uRobert Mugabe - Ungqongqoshe
Kwakumele iphumelele iZimbabwe - Umbiko
Umuzi kaMugabe uzoba indawo yokuheha izivakashi
Cape Town - UNgqongqoshe woMnyango wezokuMbiwa Phansi naMandla eZimbabwe, u-Elton Mangoma usekhombe ngenjumbane uMengameli wezwe uRobert Mugabe wathi ukhohlakele, esho kulandela isenzo sokuboshwa nokushaywa kwamalungu eqembu eliphikisayo.
UMangoma uphinde abe yiSekela likaMgcinimabhuku eqenjini eliphikisayo iMovement for Democratic Change, ukhulume wagxeka uMugabe ngesikhathi ekhuluma nemindeni engu-31 yalabo abaziwa ngele-31 Glen View Activists, ababhekene necala lokubulawa kwephoyisa okwenzeka ngonyaka owedlule.
"UMugabe nguye ophethe izikhiye zodlame kanjalo nezokuthula, uma etshela abantu ukuthi abayeke udlame nakanjani bazoluyeka," esho.
"Muva nje bekade lungekho udlame, ngoba wakhuluma wathi lungabi khona, uma ethi azishe, kuqala phansi futhi," kusho uMangoma, ecashunwa yiphephandaba iZimbabwe mail.
"UMugabe ukhohlakele, bonani lokhu ngokushaywa nokuboshwa kwabantu kwenziwa sengathi kugcinwa umthetho."